COFF Umboniso wamanzi-iindaba-Ningbo COFF oomatshini Co., ltd
Umjelo weCOFF weVidiyo
Ixesha: 2020-12-10 I ngxelo: 50
Iindaba ngeli xesha azithethi ngazo I-COFF ukuhanjiswa, ayithethi ngeemveliso zeCOFF, ngakumbi ixoxa malunga yokuzonwabisa Umsebenzi kwiwebhusayithi yeCOFF.
Ifilosofi yeCOFF ibisoloko "ingumthengi kuqala, inkonzo ngononophelo". Eyona nto kugxilwe kuyo kubathengi kunye neenjongo, ngombono wobuchwephesha ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezahlukeneyo, cinga ukuba bafuna ntoni abathengi, benze oko kufunwa ngabathengi.
Kwiodolo yethu yokuthengisa, abathengi abaninzi kunye nabasebenzi bethu bokuthengisa baya kuba nezinto ezininzi ezingachazekiyo iinkcukacha imveliso, Uhlobo lokupakisha, inkqubo yokuvelisa, Iinkcukacha zokuhanjiswa, Ukufumana abathengi kufuneka banikele ingqalelo kuthotho lwemicimbi. Ke ngoko, i-COFF ibonelela ngevidiyo emva kwevidiyo ukukhokela kunye nokuchaza ezi meko zingenakuchazeka, ukuze abathengi babe neemvakalelo ezinomdla kunye nesigwebo esichanekileyo, ukukhuthaza wonke umthengi ukuba abenentembelo kwintengiso yethu.
Ukusuka ekungenisweni kwenkampani kwinkqubo yemveliso ukuya ekuhanjisweni kwemveliso, ikhonkco ngalinye yikhamera edutyulwa amaxesha amaninzi ukuvelisa iziqwengana ezicacileyo, ezimfutshane kwaye kulula ukuzibona. Ngokukodwa kwinkqubo yemveliso yevidiyo, ukuze abathengi bazive bomgangatho weemveliso zethu, inqanaba lobuchwephesha kunye nokukhuselwa kwemveliso. Oku kukuzithemba kunye nenkxaso efunyenwe yi-COFF kwiminyaka edlulileyo evela kubathengi kwihlabathi liphela.
Ndiyathemba ukuba ezi ndaba, zinokuvumela abathengi abatsha nabadala ukuba bangahoyi iindaba zethu kuphela, kodwa bakwathe rhoqo ukutyelela iwebhusayithi yethu yevidiyo. Ukuphucula ngokufanelekileyo ukuqonda kwabathengi kwe-COFF, nceda abathengi baqonde imveliso kunye nokuthembela kwi-COFF.
Ukuba unazo naziphi na ezinye izicelo okanye imibuzo, nceda unxibelelane kakuhle wu@nbcoff.comKulungile Wu
Previous: I-0.2BBL-2BBL ye-Modular Fermentation Tank / iTanki eliBala leBhiya
Okulandelayo: 20L Brewing (ubukhulu besiko obukhoyo)